Qorannoo Siyaatil Walitti Bubbutuu OROMO: Seattle Squeeze Survey
Yaada keessan ni barbaanna!
Odeeffannoon qorannoo kana keessatti dhiyaatan akka galmee hawaasaatti waan yaadamaniif kan ummatatti dhiyaatee argan ta’uu malu. Odeeffannoo dabalataaf, Lapsii Galmeewwan Hawaasaa RCW Boqonnaa 42.56 ilaalaa. Akkamitti akka odeeffannoo keessan qabannurratti hubannoo argachuudhaaf, ejjennoo dhimma dhuunfaa keenyaa ilaalaa.
Namoonni gara handhuura magaalattiitti deemanis ta’e keessa darban jijjiiramoota gurguddoo sirna geejjibaa keenya irratti taasifne waliin sirreeffamoota baayyee taasifachuun isaanirraa eegama.
Bakka deemaa jirtan ga’uudhaaf odeeffannoo haala tiraafikaa akkamiin akka argataniifi jijjiirama taasistan akka hubachuuf dandeenyuuf nu gargaaraa maaloo.
Kun daqiiqaawwan lamaan tokko fudhachuu dhimma qabu ta’ee yaadni isin kennitan ammoo jijjiiramoota sirna geejjibbaa handhuura magaalaa Siyaatil keessatti karoorfannuufi qopheessinu akka foyyeessinuuf nu gargaara.
* 1. Haalawwan imala hadhuura magaalaa walakkaa Siyaatil keessaa yeroo ammaa akka addaatti akkamiin hubattuu? (Kan ilaallatu hunda filadhaa)
Gaazexaa naannootti argamaniin
Televijiinii naannootti argamaniin
Marsariitii oduu naannootti argamaniin
Karaa midiyaalee hawaasummaa biroo (linkdIn, kkf.)
Beeksisaafi hubachiisa konklaatota/baabura xixiqqaa keessaatti ykn bakka itti dhaabbatan/buufat waanta maxxanfamaniin
Afaaniin walitti himuun
Karaa tiraafikaa/mootummaa Siyaatiliin
Karaa Kaartaa/danaa tiraafikaa SDOT kallattiin kaameraawwan tiraafikaarraa darbuun
Karaa fuula Saphaphuu WSDOT ykn aappilikeeshina tiraafikaafi kaameraawwanii
Akeekkachiiftuuwwan imalaa kan mobaayilarraa itti galmooftanii
Kanneen keessaa kamiyyu
* 2. Handhuura magaalaa Siyaatil keessa deemuun isiniif akkamitti ilaalama?
Muddama tiraafikaa xiqqaa ta’eefi yeroo caalaa foyyaa’aa ta’e waliin hanga eegameen olidha.
Xiqqoo hanga eegamee olidha.
Jijjiiramni hin jiru
Hanga eegameen baayyee badaadha
Hanga eegameen ol baayyee badaadha Muddama tiraafikaa fi yeroo deemsaa tilmaamuun hin danda’amne
Bara 2019 keessa magaalaa keessa hin deemne
Kan biroo (maaloo ibsaa))
* 3. Pirojektoota geejjibaa itti aanana kanneen keessaa kamiyyu kan imala kee irraan dhiibbaa geessisan jiruu (caalaa dheeraa ykn yeroo imalaa gababaa, bakka dhaabbannaa baasii haaraa ykn toora bakka bakkaa, kkf.?)
Riqichi Daandii Alaaskaa Amajji keessa torban sadiif cufamuu
Hulluuqa SR 99 Guraandhala keessa baname
Ulaa baasii Hulluuqa Geejjibaa Magaalaa Siyaatil keessa duraan keessa deemaamaa turerratti jijjiiramoota Bitootessa keessaa.
Diigamuu Riqicha Daandii Alaaskaa kan Bonaa
Jijjiiramoota ulaawwan baasii Fulbaana Lixa Siyaatil/Buuriin
Riqichi Daandii Feerviiwuu Fulbaana keessa cufachuu
Sadaasaa keessa Hulluuqaa SR 99 Toling taasisuu
Pirojektoota kunneen keessaa tokkollee imalootan magaala keessa taasisurraan dhiibbaa hin geessisan
Kan biroo (maaloo ibsaa)
* 4. Sababa Siyaatil walitti butuutiin, akkaataa kanaan dura ittiin imalaa turtan (bifa birootiin imaltanii, guyyaa keessaa yeroo gara garaatti, fakeenyarraa hojjechuu, kkf.) keessaa hanga tokko jijjiirtanittuu?
Eyyeen, akkaataan ittiin imalu yeroo Riqichi cufate jijjiireen ture, garuu erga hulluuqni SR 99 banameen booda gara akkaataan duraan itti imaluttin deebiye.
Eyyeen, sababii dhiibbaa tiraafikaa biraatiif yeroodhaaf akkaataan duraan ittiin imalaa ture jijjiireen ture.
Eyyeen, akkaataan duraan ittiin imaluu bare sababii dhiibbaawwan tiraafikaa waliin wal hin qabanneen jijjiireera.
Eyyee, akkaataan duraan bare dhaabbataadhaan jijjiireera.
Lakki, Akkaataan bare hin jijjiirre.
* 5. Yoo eyyee ta’e, kan kanaan dura fayyadmaa turtan caalaa tarsiimoo imalaa akkamii yeroo ammaa kana kan caalaa fayyadamaa jirtan? (Kan ilaallatu hunda filadhaa)
Konkolaataa nama waliin fayydamuu
Kan argan fayyadamuu (uber, Lyft ykn taaksii)
Sarara baabura salphaa
Ride2 fi karaa gara wiirtuu cece’umsa geejjibaatti konkolaataa fedhiin deddebisaniin daruu
Kaar Sheer (fkn. Riich Naawo)
Baabura imaltoota hunda-galeessa ta’e
Magaalaa keessa xiqqoo deemuu
Guyyaa keessatti yeroo garaa garaatti deemuu
Mana taa’anii ykn bakka fagoorraa hojjechuu
* 6. Waa’ee dhiibbaawwan tiraafikaafi filannoowwan ittiin imalanii ilaalchisee odeeffannoo eessaa argattu?
Warra si hojjechiisan/qacaranirraa
Hiriyoota, jaalleewwan waliin hojjetan, maatiirraa, kkf. Irraa
Metiroorraa, WWSDOT irraa, geejjiba hunda-galeessaarraa ykn marsariitii Magaalaa Siyaatil kan akka seattle.gov/traffic irraa.
Duulawwan akka www.FlipYourTrip.org irraa
Ani odeeffannoo hin barbaadu
Eessaa akkan odeeffannoo argadhu hin beeku
* 7. Yeroo ammaa kanatti akkamitti akka magaalaa Siyaatil keessa deemtan foyyeessuuf gargaaruu keessatti yaadni keessan maalidhaa?
* 8. Mee waa’ee keessan hanga tokko nutti himaa! Odeeffannoowwan gadii kana dhiyeessuun filannoo irratti hundaa’a, garuu wanti nuuf qooddan garuu eenyutu akka qorannoo gabaabduu kana keessatti hirmaate hubachuuf nu gargaara.
Naannoo akkamii keessa jiraattu? (ZIP)
Naanoo akkamii keessa hojjettu? (ZIP)
* 9. Saala akkamiin beekamtu?
Ofiin of ibsuu kan barbaaddan yoo ta’e
* 10. Umuriin kee yeroo ammaa meeqaa?
* 11. Galiin waliigalaa maatii keetii hangam?
$30,000 tiin gari
$30,001 hanga $60,000
$60,001 hanga $90,000
$90,001 hanga $120,000